नेशनल प्याब्सन सुर्खेतको अध्यक्षमा खनाल चयन
२५ जेठ, सुर्खेत । राष्ट्रिय नीजि तथा आवासिय विद्यालय एशोसियसन नेपाल (नेशनल प्याब्सन) सुर्खेतको अध्यक्षमा दिपेन्द्र राज खनाल सर्वसम्मत चयन भएका छन् । शनिबार सम्पन्न जिल्ला कार्यसमितिको चौथो अघिबेशनले खनाललाई अध्यक्षमा चयन गरिएको हो । यसैगरी उपध्यक्षमा कुसुम भट्टराई चयन भएका छन् भने…
हिंसाबाट बच्ने उपाय सिकाउँदै किशोरीहरु
२४ जेठ । हिंसा हुन सक्ने अवस्थाहरु र यसबाट बच्ने उपायहरु जानीसकेपछी देवचुली नगरपालिका वडा नं. १७ आँपचौरकी स्वस्तीका भण्डारी आफुजस्तै किशोरीलाई सिकाउँदै छिन् । वरचुली मा.वि कक्षा ९ मा अध्ययनरत भण्डारीले यसको बारेमा प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिमबाट हिंसा हुन सक्ने अवस्थाहरु, यसको बच्ने…
९ जेठ । मानवअधिकार र कानुनी शिक्षा विषयक दुई दिने तालिम वीरेन्द्रनगर १५ रतुमा सम्पन्न भएको छ । मानवअधिकार तथा ग्रामीण वातावरण संरक्षण केन्द्र (हुरेक नेपाल) सुर्खेतको आयोजना र वीरेन्द्रनगर नगरपालिका १५ नं. वडा कार्यालयको सहयोग र समन्वयमा उक्त तालिम सम्पन्न भएको हो ।…
बालिकाको अधिकार संरक्षणको लागि राष्ट्रिय संजाल गठन
५ जेठ । बालिकाको अधिकारको संरक्षणका लागी राष्ट्रिय संजाल गठन गरिएको छ । समतामूलक समृद्धि र सुखी नेपालको आधार, बालिकाका लागि समान अवसर र अधिकारको निम्ति स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पैरवी गर्ने उद्देश्यले नेपालमा बालिका अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाहरुको पहलमा बालिका अधिकार संरक्षणको…
२२ माघ । विश्वका सवै देशमा फेब्रुअरी ५ अर्थात माघ २२ गतेका दिन नवलपरासीमा पनि एक कार्यक्रम गरी सुरक्षित ईन्टरनेट दिवस मनाइएको हो । जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालको संयोजन तथा परिवर्तनका लागि युवा नेपाल र बेटर नवलपरासीसँगको समन्वयमा देवचुलीका ३ माध्यमिक विद्यालयमा…
१३ माघ । नेपाल सरकारको मातहतमा श्री कृष्ण संस्कृत माध्यामीक विद्यालय सुुर्खेतले दृष्टिविहीन छात्राबास संञ्चालन गर्दै आएको छ । विभिन्न जिल्लाका गरी १५ जना छात्राहरु उक्त विद्यालयमा पढ्दै र छात्राबासमा बस्दै आएका छन् । स्रोत कक्षामा ब्रेललिपी सिक्ने र साङ्गहरुसंगै प्रतिस्प्रर्धा गरेर पढ्नुपर्ने उनीहरुको…
१० माघ । सुर्खेतको एक सामुदायिक विद्यालयले पशु स्वास्थ्य क्लिनिक सञ्चालन गरेको छ । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खैतको वीरेन्द्रनगर ११ धुलियाविटमा रहेको शिब माध्यमिक विद्यालयले पशु स्वास्थ्य क्लिनिक संचालन गरेको हो । १८ महिने पशुविज्ञान विषयमा अध्यापन गराइरहेको शिव माविले विद्यार्थीहरुको शिक्षण सिकाईमा सहजताका…
७ माघ । घरको आडैमा विद्यालय भएपनि ६ महिनाकी बहिनीको हेरचाह गर्ने घरमा कोहि थिएन । बिदाको दिन बाहेक एक दिन पनि विद्यालय नछोड्ने सुनिता बहिनीको धरालो गरेर करिब १ महिना विद्यालय गइनन् । घरको छतबाट विद्यालयमा साथिहरुले पढेको हेर्नुको विकल्प थिएन । पढाइमा…